Waalidka wanaagsanoow amase Waalidka sharafta lahoow | Helsingin kaupunki
Etusivu » Kulttuuri ja vapaa-aika » Tapahtumat » Kaupunkitapahtumat » Pormestarin itsenäisyysjuhla neljäsluokkalaisille » Waalidka wanaagsanoow amase Waalidka sharafta lahoow
Waalidka wanaagsanoow amase Waalidka sharafta lahoow
Xafladda xornimada ee uu duqa magaaladu ugu talagaly ardayda fasalka afaraad
Fasalada afaraad ee dugsiyada Helsinki waxaa sanad kasta lagu casuumaa xafladda xornimada ee uu qabanqaabiyo duqa magaaladu. Arday kasta wuxuu duqa magaalada ka helayaa kaarka casuumaadda ee xafladda qoob ka ciyaarka ee ka dhaceysa Guriga Finland.
Xafladaha waxaa la qabanqaabiyaa sanad kasta todobaad kahor maalinta xornimada Finland ee rasmiga ah. Sanadka 2019ka waxaaa Guriga Finlandia lagu qoob ka ciyaarayaa Khamiista 4 December. Waa marki 23aad ee madashan la qabanqaabiyo.
Xafladda waxaa lagu casuumayaa dhammaan ardayda fasalka afaraad ee dugsiyada Helsinki martiduna sanadka waa marka la isugeeyo 6517 , kuwaas oo 6024 kamid ah ay yihiin arday iyo macallimiinta oo ah 493.
Xafladda xornimada waxaa loogu dabbaaldegayaa saddex madal oo isaga mid ah waxyaabaha ay ka kooban yihiin, kuwaas oo uu jadwalkoodu yahay: Xafaladda 1aad saacadda 9.30-11.15, xafladda 2aad saacadda 12.45-14.30 iyo xafladda 3aad saacadda 16.00-17.45.
Xaflad bilicsan oo la qabanayo bartamaha maalmaha dugsiga
Duqa magaalada Jan Vapaavuori ayaa marki seddaxaad la xafladeynaya ardayada fasalka afaraad. “Waxa laga hadlayo waxaa ka mid kamid ah shaqooyinka ugu farxadda badan uguna qiimaha badan sanadka. Reynreynta carruurta ayaa ku qaadaneysa xafladuna waa fursad qofku ku xasuusto sida xornimadu ay u tahay arrin lagu farxo oo dadka oo dhan taabaneysa. Xafladda xornimada ee ardayda fasalka afaraad waxaan u heystaa mid kamid ah dhaxallada ugu muhiimsan ee magaalada.
Salaanta qabanqaabiyaha xafladda kaddib waxey carruurtu waxey baranayaan goobaha xaflada waxeyna dhadhaminayaan kidifyo yaryar oo macmacaan iyo dhanaanba isugu jira, kuwaas oo ay wadajir u qorsheeyeen cunto kariye sare Markku Luola iyo maqaayada Finlandia. Circus Helsinki ayaa madadaalineysa ardayada fasalka afaraad ee xafladeyneysa in ay martidu ka imaanayaan iyo marka ay salaanta faylka ugu jiraan.
Duqa magaalada ayaa hadal u jeedinaya martida markaas kadibna waxaa la dhegeysanayaa hadalka wakiilada dadka xaflada jooga oo af finnish iyo iswidhish ah. Waxaa jawiga sare loogu qaadayaa heesta Maamme oo wadajir loo qaado, taas oo ay kooxda baambeyda ee Kaartti garaaceyso.
Fannaanka xidiga ah waa lama filaan inta laga gaarayo maalinta xafladda
Qeybta soo jireenka ah ee xafladda kaddib waxaa masraxa koraya fannaan xidig ah, kaas oo si ah ilaa iyo inta laga gaarayo maalinta xafladda. Fannaanka xidiga ah ee xafladda waxaa muusikada u garaacaya Houseband Must.
Jawigu wuxuu sare ugu kacayaa marka qoob ka ciyaarka la ciyaaro
Riwaayada kaddib waxaa billaabanaya qoob ka ciyaarista.
Carruurtu waxey u diyaar garoobeen xafladda xornimada iyagoo soo bartay qoob ka ciyaarka soo jireenka ah iyo caadooyinka habdhaqanka ee ka midka ah xafladda. Xusuusashada tallaabooyinka qoob ka ciyaarka waxaa fududeynaya lamaane masraxa ku ciyaaraya oo qoob ka ciyaarka hagaya.
Kooxda bambeyda ee Kaartti ayaa qaabilsan soo gelitaanka xafladda iyo muusikada qoob ka ciyaarka.
Xafladda xornimada ee duqa magaaladu waxey ka billaabatay aragtida duqa magaalada Eva-Riitta Siitonen marki ay xilka heysay. Siitonen waxey qabtay in ay muhiim tahay in bartamaha maalinta shaqada ee dugsileyda la keeno jawi xafladeed. Xafladda xornimada carruurta ee ugu horeysay waxaa la qabanqaabiyay sanadki 1997.Duqi hore ee magaalada Jussi Pajunen wuxuu martigeliyay xafladda 12 jeer wuxuuna madasha ku sifeeyay sanadkii shaqada ee tan ugu wanaagsan.
Dhacdadan waxey sidoo kale sanad kasta heshaa dareen caalami ah.
Kala soco xafladda kanaalka Helsinki
Kanaalka Helsinki si toos ah ayuu u tebinayaa dhacdooyinka xafladda ee maalintan.